Inona no hatao raha tsy mamaly ny Mpamoaka? - Fahadisoana
Tena > Fahadisoana > Tsy mamaly ny mpanonta - ahoana no hanapahanao hevitra
Tsy mamaly ny mpanonta - ahoana no hanapahanao hevitra
Inona no hatao raha tsy mamaly ny Mpamoaka?
Ny fitsaboana mangina avy anyfamoahana tsy mandray andraikitrana tena-famoahanaorinasa? ...
Raketo an-tsoratra ny zava-drehetra. ...
Avereno jerena ny zonao. ...
Miorena tsara, fa mahaiza manaja. ...
Ampahafantaro azy ireo fa matotra ianao. ...
Ho fisaorana farany, mandehana imasom-bahoaka. ...
RAHAlasibatry ny hosoka ianao, tatero.
Fa maninona ny Microsoft Publisher-ko no tsy mandeha?
Raha sendra manana ianaoNY ANYamin'nympitory, misy safidy hafa tsara kokoa azonao andramana. Fomba iray hanamboarana ireoNY ANYdia ny manavao nympitoryamin'ny kinova farany ary zahao raha manampy izany. RAHAMicrosoft Publishertsy hanaoasaamin'ny Windows 10 mihitsy, ny fametrahana indray dia mety ho safidy tsara indrindra.
Andriamatoa na Ramatoa malala, tongasoa ato amin'ity fampianarana ity! Andao hojerentsika fohy ny fomba fampiasana ny Microsoft Publisher, ny vokatra fanontana nomerika Office. Tsidiho ny fantsona YouTube sy tranokalanay ofisialy raha mila votoaty, fanampiny, ary toro-hevitra lalindalina kokoa ho an'ny Microsoft Office! avy amin'ireo pejin-boky, magazina, nefa koa dokam-barotra sy pejy iray misy pejy iray dia tsy maintsy navadika ho lasa interface tsara be mpampiasa sy tsotra. Manomboka eo amin'ny pejy fandraisana izany ary mampiseho modely efa voaomana maromaro eo ambony ary ireo tetik'asa farany anao eto ambany.
Amin'ny ankavia ianao dia afaka mandeha any amin'ny New raha hijery ny lisitr'ireo modely pejy azo alaina, avy amin'ny modely namboarina ka hatramin'ny modely banga, misy habe mahazatra mahazatra azo alaina. Raha hijery ny fomba fampiasana ny Publisher, andao atomboka amin'ny maodely taratasy banga. Ny tetikasa vao noforonina dia hisokatra amin'ny sehatry ny asa lehibe, miaraka amin'ireo fitaovana sy fiasa rehetra hita ao anaty kofehy eo an-tampony ary ny topi-maso lehibe eo afovoany, ahafahanao manova sy manamboatra ny pejinao.
kaody hadisoana 0x80073d0b
Azonao atao koa ny manatomotra sy mivoaka amin'ny alàlan'ny fihazonana ny lakilen'ny CTRL. Ny tetikasan'ny Mpamoaka, fantatra ihany koa amin'ny famoahana, dia misy pejy maromaro ary ny pejy tsirairay dia misy karazana zavatra isan-karazany, ao anatin'izany ny latabatra, sary, endrika sary ary lahatsoratra. Ho an'ny tetikasa vaovao, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mametraka ny safidin'ny pejy ary ny fanampiana hitanao fa tena ilainao.
Ao amin'ny takelaka Design Page, azonao atao ny manamboatra ny orientation sy ny haben'ny pejy rehetra, ary apetraka ihany koa ny sisiny mba tsy hanarahana ny sisiny. Azonao atao ihany koa ny manafatra sy mampiasa ny maodely efa voaomana miaraka amin'ny ChangeTemplate ary ampio ny takelaka pejy raha tianao. Mampiasà torolàlana hamaritana ireo mpitari-dalana maitso hanampiana anao hanaja ny lamina sy ny firindrana ny pejy ankehitriny izay zahana.
Manampia torolàlana mitsivalana sy mitsangana ary ovao izy ireo mba hifanaraka amin'ny layout tianao. Ny takelaka View dia mamela anao hahafahanao manampy ny sary fanampiana hafa izay ho zahana mialoha fa tsy omena mihitsy amin'ny tetikasanao farany. Ampandehano ny tsipika fanampiana, ny takelaka, ny tsipika an-tsoratra na ny zavatra mametra amin'ny manga.
Ny mpanapaka dia mety mahasoa amin'ny fanamarinana ny fametrahana ny pejy miaraka amin'ireo singa tena miseho. Raha tsy marina ireo dia azonao atao ny manova azy ireo amin'ny alàlan'ny fandehanana mankany amin'ny File, Safidy ary avy eo mandroso. Vantany vao vonona ny pejy dia azonao atao ny manampy zavatra marobe avy amin'ny takelaka Home.
Ny endrika dia sary an-tsary izay maneho ny tsipika na ny endrika mihidy. Dropany amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fisarihana ny topi-maso ary ampiasao ny kiheba Format eo an-tampony mba hanitsiana ny famenoana, ny fetra, ny loko ary ny vokany. Ireo boaty an-tsoratra dia endrika mahitsizoro tsy feno na feno soratra.
Miaraka amin'ny Draw Text Box, kitiho ary tariho mba hamoronana boaty an-tsoratra izay mametra ny toerana ahafahan'ny votoatiny miely sy miparitaka. Avy eo soraty ary ampiasao ny fitaovana fanaovana sary hanamboarana ny boaty lahatsoratra ho endrika na ny boaty lahatsoratra hametraka ny fananana an-tsoratra toy ny endri-tsoratra, fomba, habe, fenoy loko ary izay rehetra tianao tianao. Eo ambanin'ny Text dia azonao atao koa ny manitsy ny soratra amin'ny endriny na afaka manova ny làlan-kalehany 90 degre.
Ao anatin'ny fampifanarahana dia azonao atao ny mametraka ny fampifanarahana an-tsoratra, mampihatra tsanganana maromaro na mampiasa sisiny azo antoka ao anatin'ny sehatry ny lahatsoratra. Mampiasà typografika raha ampiana litera lehibe na fomba manokana. Ao amin'ny tabilao Home, azonao atao ny mifamadika amin'ny Paragrafitra hanamboarana ny fizarana ireo fehintsoratra an-tsoratra izay ampahany amin'ny atiny an-tsoratra noforoninao rehefa tsindrio ny Enter mba hamoronana tsipika vaovao.
Apetraho ny indentation sy ny elanelan-tsipika alohan'izay, isaky ny fehintsoratra, na ao anatin'ny andalana amin'ilay fehintsoratra iray ihany. Ny mpitondra dia fitaovana matanjaka amin'ny fanitsiana andalana. Apetraho eo amin'ny fehintsoratra irina ny marika ary ampiasao ireo mari-pamantarana ambony etsy ambony mba hanitsiana ny fizarana azy.
Ampiasao ny marika havia sy havanana hanitsiana ny sisin-tany, ary ny antsasaky ny marika ankavia hametraka ny sisin'ireo andalana voalohany na hafa amin'ilay fehintsoratra. Raha kely loatra ny boaty fandefasana lahatsoratra hanehoana ny atin'ny lahatsoratra rehetra dia hiseho ireo teboka mena sy teboka eo amin'ny bokotra. Azonao atao ny mampiasa ny voalohany hanovana habe ny boaty, na tsindrio ireo teboka hisafidianana ny toerana hanitarana ny votoatin'ny lahatsoratra tsy hita, oh.
B. sehatra an-tsoratra misy, misy endrika na sehatra lahatsoratra vaovao izay tianao indrindra. Ireo zavatra roa ireo dia mifamatotra ary mampiseho ny atiny an-tsoratra hatramin'ny sehatry ny lahatsoratra voalohany ka hatramin'ny zavatra faharoa amin'ny alàlan'ny bokotra zana-tsipìkany.
Ireo zavatra ireo dia azo apetraka amin'ny pejy iray na amin'ny pejy samihafa. Ho fanampin'ny endrika sy soratra, aorian'ny famaritana ny laharana sy tsanganana, azonao atao koa ny manampy latabatra. Ampidiro ny sela ary ampiasao ny tabilao Design etsy ambony hanamboarana ny endrika, loko, sisintany, fananana an-tsoratra ary ny tabilao Layout hitantanana ny tsanganana, laharana ary fampifanarahana.
Amin'ny sary dia azonao atao ny manafatra ny sarinao manokana na misafidy ny fisehoana maimaimpoana an-tserasera, ampio sary sy vokany na ampidiro ny lahatsoratra efa vita ho marika. Ampandehano ny vokatra mba hanangona ny sary. Raha mbola tsy vonona ny sary dia azonao atao ny mitahiry ny habaka ao amin'ny firafitry ny pejy amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo placeholder avy amin'ny tsofoka Insert.
Ireo dia sary mangarahara izay azonao nofenoina auto amin'ny alàlan'ny fitarihana sary azy ireo. Azo atao eo anelanelan'ny sary roa koa izany. Azonao atao ny manafatra rakitra ivelany ao anatin'ireo pejy toa anao afaka manafatra sary.
Azonao atao ny manokatra azy amin'ny alàlan'ny tsindry indroa amin'ny kisary misy azy. Ny zavatra rehetra ao anaty pejy dia azo tantanana tsy miankina sy amin'ny fomba mitovy. Tsindrio ny zavatra rehetra hisafidianana azy ary hisintona hamindra azy.
Tazomy ny lakilen'ny Shift mba handeha mitsivalana sy mitsangana. Ampiasao ireo teboka handrefesana sy hanodinana ary tsindrio havanana koa hanapaka, handika, hametahana ary hamafana ilay zavatra. Mandehana any amin'ny Format hanamboarana ireo safidy fanefatra mandroso.
Ho fanampin'izany, azonao atao ny manindry Item Size eto ambany raha mila fanazavana fanampiny momba ny tena refy amin'ilay singa voafantina. Raha mifanindry ny zavatra sy ny lahatsoratra dia azonao atao ny mampiasa ny fizarana Alamino eo amin'ny kiheba Home mba hamaritana ny fahitana azy ireo. Ampiasao ny Mandrosoa ary handefasa miverina hamaritana raha toa ka tsy tokony hapetraka eo ambony na eo ambanin'ireo zavatra mifanindry ireo zavatra ankehitriny.
Mampiasà Wrap Text, na izany aza, hamaritana ny fomba tokony haparitaka ny lahatsoratra rehefa mahatratra azy ny zavatra ankehitriny. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny Insert kiheba hanafarana zavatra sarotra vonona hampiasaina, toy ny: B. Pejy, alimanaka, sisiny ary doka.
Ireo rehetra ireo dia antsoina hoe banga fananganana, izay misy endrika maro, boaty an-tsoratra ary zavatra izay atambatra. Amin'izany no ahafahanao mamindra sy manova ireo zavatra rehetra ireo indray mandeha. Ireo dia banga fanamboarana efa vita, fa afaka mamorona anao manokana ianao amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo zavatra liana rehetra amin'ny alàlan'ny fihazonana ny bokotra Ctrl, tsindrio havanana ary mankany amin'ny Vondrona.
Ao anatin'ny sakana, ny zavatra tsirairay dia voafetra amin'ny alàlan'ny teboka misy lakroa ary tsy azo afindra raha tsy hoe ny vondrona rehetra dia nosakananao voalohany. Eo ankavia dia ny takelaka fitetezana pejy miaraka amin'ireo pejy rehetra amin'ny famoahana anao. Azonao atao ny manindry an-kavanana izay habaka banga rehetra hamoronana pejy vaovao ary tsindrio izay pejy raha hijery azy ireo.
Mba hanovana ny filaharana eo anelanelan'ny pejy dia tsindrio fotsiny ary sintomy ao anaty lisitra. Ankoatr'ireo pejy mahazatra ireo dia manana pejy tompony sy katalaogy koa ianao. Ireo pejy master dia ampiasaina hamerenana ny atiny amin'ny pejy maro amin'ny tetikasanao.
Ohatra, azonao atao ny mampiditra lohateny, footer na nomeraon-pejy amin'ity pejy master ity mba hamerenanao azy ireo amin'ny pejy rehetra amin'ny famoahana anao nefa tsy mila atao an-tanana amin'ny pejy tsirairay. Mandehana mijery ary avy eo pejy Master mba hahitanao ireo pejy master rehetra misy. Azonao atao koa ny manampy lohateny sy tongotra, fa misy zavatra tianao averimberina ihany koa.
Avy eo, eo ambanin'ny Fampiharana, safidio izay tokony ampiharina ny atin'ny MasterPage, amin'ny pejy rehetra na amin'ireo voafantina. Ampiasao ny Pejy Master akaiky mba hiverenana amin'ny topi-maso pejy mahazatra. Ireo pejy katalaogy dia ampiasaina hananganana lisitra feno avy amin'ny database database a.mdb.
Tsy ho hitantsika amin'ity lesona tsotra ity. Raha vantany vao vonona ny famoahana dia mandehana mankany amin'ny File, Export hanondrana azy amin'ny antontan-taratasy maro azo pirinty sy nomerika toy ny .pdf, .html na toy ny .pub hanokatra indray ny Publisher ary hanova azy amin'ny fotoana rehetra.
Misaotra anao nijery an'ity tutorial tsotra ity! Tsidiho ny fantsonay hahitanao fanampim-panazavana momba an'i Microsoft Office!
Fa maninona no mamaky hatrany ny Mpamoaka?
Raha misy programa mampidi-doza ny rafitrao dia misy ny fahafahan'ny Microsoftmpitory2010novakivakin'nyamin'ny rafitrao. Raha miatrika olana amin'ny Microsoft ianaompitory2010, mila manafoana ireo singa ianao izay miteraka olana amin'ny mpampiasa. ... Mila esorinao koa ny malware amin'ny rafitrao.
Inona no dikan'ny hoe rehefa misy programa tsy mamaly?
Tongasoa indray, amin'ity lahatsoratra anio ity, hasehoko anao ny fomba fanamboarana programa tsy hamaly amin'ny Windows 10 PC na solosaina finday fa vahaolana azo antoka, saingy hiezaka mafy aho hanampy. Tsy mila manaraka ny fomba rehetra hanandramana sy hanamboarana azy ianao. Aza adino ny sasany raha toa ka efa nahavita azy ireo ianao na tsy mieritreritra ny hahomby, tadidio ny mamela zavatra mitovy ary aza misalasala misoratra anarana raha manampy ilay lahatsoratra.
Andao hidina amin'ireo fomba, ny zavatra voalohany hilazana dia ny fivoahana vetivety fotsiny amin'ny programa mandritra ny fotoana fohy dia afaka manamboatra ny olana, indraindray ny fampiharana sasany dia mibaiko baiko na manao asa mety hipoitra izany, mandra-pahavitan'izy ireo ka mendrika izany. manandrana. Manaraka izany dia tokony hataonao loha laharana amin'ny laharam-pahamehana ny fampiharana, programa na lahasa amin'ny Task Manager. Ity dia hilaza amin'i Windows fa ity programa ity no zava-dehibe indrindra, ary antenaina fa ny tena zava-dehibe indrindra, izay hanampy azy hamaly indray ary hamita izany amin'ny asa miandry rehetra.
Mba hanaovana laharam-pahamehana ny fampiharana na programa dia mandehana aloha mankany amin'ny Task- Manager. Azonao atao ny tonga any amin'ny fipihana tsara ny fantsom-pifandraisana eo amin'ny farany ambany ary avy eo misafidy ny Task Manager amin'ny lisitra. Rehefa misokatra ny Task Manager dia mankanesa any amin'ny kiheba Details.
fanesorana azo antoka Norton
Tokony hahita lisitry ny lahasa miasa amin'ny PC-nao ianao izao. Tadiavo ilay lahasa na programa tsy mamaly ao anaty lisitra. Ao anaty filaharana alfabeta Mandidy izay tokony hanampy, rehefa hitanao fa tsindrio tsara eo amboniny ary avy eo alefaso ny laharam-pahamehana napetrakao.
Misafidiana avo izao amin'ny alàlan'ny fanindriana azy ary miandry fotoana fohy hahitanao raha toa ka milamina io. Ny vahaolana azo atao manaraka dia ny fanidiana ireo programa hafa rehetra, mitovy amin'ny fomba farany, ity dia tokony hanampy ny PC-nao tsy hifantoka afa-tsy amin'ny fampiharana tsy mamaly. Hamarino tsara fa hitahiry asa alohan'ny hanidiana fampiharana hafa.
Ireo rehetra ireo no fanamboarana fotoana tena anananako momba an'ity olana ity. Raha mitranga tsy tapaka ny olana dia manana vahaolana vitsivitsy aho hilazana fa mety tsy hitranga intsony izany amin'ny ho avy o Atsaharo amin'ny Task Manager alohan'ny handehanana amin'ireo fanamboarana ireo. Voalohany, alao antoka fa afaka mihazakazaka ny rindrambaiko na ny programa tsy mamaly ny PC-nao.
Raha nandeha tsara taloha dia tsy mila miahiahy ianao. Be loatra izany, fa raha mbola tsy nanao an'io ianao dia jereo raha natao ho an'ny PC-nao izany.
B. ho an'ny macOS fa tsy Windows na ho an'ny kinova Windows hafa. Ny fakan-tsarinao PC dia afaka mametra ny fampiharana sasany tsy handehandeha Hamarino raha mahafeno ny fepetra farafahakeliny ny rafitrao.
Mety ho eo amin'ny tranokalan'ny fampiharana na programa izany, na eo amin'ny pejy fivarotana nahazoanao azy. Ny fomba manaraka dia ny mihazakazaka ny fampiharana na programa amin'ny maha-mpitantana azy mba hisokatra sy hiasa tsara. Tadiavo ny fampiharana ary kitiho eo aminy ary safidio ny Mihazakazaka ho mpitantana, jereo raha toa ka mandeha io.
Raha tsy izany dia andao hiroso amin'ny fomba manaraka. Manaraka izany, manoro hevitra aho fa. fanavaozana rindrambaiko.
Ity dia tokony hanaisotra ireo lesoka rehetra mahatonga ny lesoka ary mety hamboarina ireo rakitra maloto mety hiteraka azy io. Mila manavao ilay fampiharana ianao na amin'ny magazay niavinao azy. Ny fanavaozana dia azo atao an-tserasera ihany koa.
Andramo ihany koa ny manova ny sasany amin'ireo toe-javatra, na miverena miverina amin'ny fotoana nanombohan'ny olana, ary angamba avereno amin'ny toerany tany am-boalohany daholo ny toe-javatra. Izany dia misy ny fametrahana ao amin'ny app sy amin'ny ankapobeny ao amin'ny Windows 10. Ny fomba manaraka dia ny manandrana ny famerenana ny rafitra raha tsy mbola nataonao.
Ny famerenana indray dia afaka manampy amin'ny fanavaozana toe-javatra maro ao amin'ny PC anao ary afaka manampy amin'ny famahana ilay olana izany. Anjaranao raha te hanandrana an'izao ianao na amin'ny faran'ny lahatsoratra, fa raha miverina indray ianao izao rehefa miverina amin'ny lahatsoratra dia hanana vahaolana vitsivitsy hanandramana izahay, antenaina farafaharatsiny mba hisy iray amin'izany asa. Mifantoka amin'ny fanavaozana ny Windows izahay izao.
Voalohany indrindra, raha fantatrao fa ny fanavaozana ny Windows no nahatonga an'io olana io dia tsindrio izao ny karatra hijerena ny lahatsoratro izay mampiseho aminao ny fomba famongorana ny fanavaozana ny Windows vao tsy ela. Ny sisa ataonao dia raha azonao antoka zato isan-jato fa ny fanavaozana no nahatonga ny olana. Raha toa ny tsy fanavaozana ny Windows vao tsy niteraka ny olana dia mety ho mendrika ny hijerena sy hametrahana fanavaozam-baovao Windows vaovao Raha hijery ny fanavaozana ny Windows dia mankanesa any amin'ny pejy Setting, tsindrio aloha ny kisary gear eo amin'ny menio Start.
Ao amin'ny fikirana, safidio ny Vaovao farany sy ny filaminana. Zahao izao ny fanavaozana ity pejy ity ary apetraho izy ireo. Raha misy antony tsy hanavaozan'ny PC anao dia kitiho izao ny sarintany hankanesana ao amin'ny lahatsoratro momba ny fanamboarana izany sy ny fanavaozana ny Windows.
Andao hiroso amin'ny fomba manaraka. Ny fomba manaraka dia mifantoka amin'ny fampiharana Windows ihany. Raha tsy avy ao amin'ny Windows App Store ny fampiharana anao dia azonao atao ny mandingana an'io.
Hiezaka ny hampiasa ny rindrambaiko Windows Troubleshooter aloha izahay. Raha hanao an'ity olana ity ao amin'ny bara fikarohana dia kitiho ny safidy antsoina hoe Troubleshootsettings. Eto dia tsindrio ilay rohy manga antsoina hoe Add Troubleshooters fanampiny.
Mikorisa midina ary tokony ho ilay troubleshooter antsoina hoe Window store apps. Andramo izany ary jereo izay lazainy, mety misy soso-kevitra sasany. Azonao atao koa ny manandrana manamboatra ny rindranasa raha sendra tsy tapaka ny olana.
Alohan'ny hanaovana izany dia manoro hevitra aho ny hamerenanao ny sasany amin'ireo fisie ao amin'ilay fampiharana, toy ny: B. Lalao na fisie ho an'ny tetikasa raha toa ka voatahiry ao anaty fampirimana lehibe an'ny fampiharana izany. Ao amin'ny PC-nao, tadiavo ny fampirimana voalohany an'ny app ary adika izay rakitrao fantatrao fa misy fampahalalana tianao hotanana.
Apetaho amin'ny toerana azo antoka amin'ny PC-nao ity. Tena te-hanao an'io ianao alohan'ny handehanana amin'ny fomba farany hanamboarana fampiharana, mandehana aloha amin'ny Control Panel. Afaka tonga any ianao amin'ny fikarohana azy ao amin'ny bara fikarohana.
Ao amin'ny Control Panel, kitiho ny rohy manga hanesorana programa. Ity rohy ity dia eo ambanin'ny fizarana Programme green, programa, tokony ho hitanao izao ny lisitry ny programa rehetra amin'ny PC-nao. Tsy azonao atao ny manamboatra azy rehetra satria ny sasany tsy manome an'ity safidy ity, fa zahao ny fampiharana izay manana olana ary kitiho ny tsindrio havanana eo amboniny.
Raha misy safidy fanamboarana dia tokony hilaza izy fa manamboatra ao amin'ny lisitry ny safidy izay mavesatra. Raha tsy misy io safidy io dia mety hiteny izy hoe ovao izay mety ho safidy mitovy amin'izany. Na inona na inona ataonao dia samy hafa ny fampiharana rehetra, fa araho fotsiny ireo dingana ao anatiny ary tadidio ny hamerina ny zava-drehetra ao anaty rakitra; ny fomba farany hamafana tanteraka ny app.
Aorian'izany dia tokony ho afaka mamerina mametraka azy ireo toa ny nataonao tamin'ny voalohany ianao. Hamarino tsara fa hamerina ny fikirana rehetra, ny tahiry ary ny fisie izay ao amin'ny fampirimana fampiharana lehibe, raha tsy izany dia hofafana izy ireo. Mba hamafana ny rindranasa ao amin'ny Windows 10 dia mila miverina amin'ny toerana nanandramanao nanamboatra rindrambaiko ianao.
Raha nanidy azy ianao, ny Control Panel dia ny famafana ny programa, avy eo esory ny programa iray avy ao amin'ny faritra Programs. Tsindrio eo dia safidio ny Uninstall. Araho ny dingana ary avelao izy hanala.
Aorian'izany dia apetaho indray ary antenaina fa nahavaha ny olana izany. Mampalahelo fa ireo no fomba rehetra ananako, raha mbola tsy mandeha izy aorian'ny fanandramana azy dia manoro hevitra aho ny hikaroka ny fampiharana marina sy ilay bibikely. Raha misy dinika mifandraika amin'ilay programa sahirana aminao dia toerana mety hametrahana an'io fanontaniana io izy ireo satria tokony ho toerana tsara kokoa hanampiana izy ireo.
Toy ny mahazatra dia tazomiko ho nohavaozina miaraka amin'ny vahaolana vaovao hitako ny famaritana ary raha misy ianareo mahita vahaolana amin'ny ho avy dia tsara raha afaka miverina amin'ny lahatsoratra ianao ary mandefa izany amin'ny fanehoan-kevitra hanampiana ny hafa. Tsindrio izao ny sarintany eo amin'ny efijery hijerena ny lahatsoratro mampiseho anao fomba tsotra folo ahafahanao manafaingana ny PC Windows 10 anao. Ampio hanohana ny fantsona amin'ny fitsidihana ny fivarotana - ny rohy dia ao amin'ny famaritana sy amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Raha manana fanontaniana ianao dia ampahafantaro ahy ireo hevitra etsy ambany, ary raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity dia aza hadino ny mamela ny Tianao ary misoratra anarana amin'ny toro-hevitra bebe kokoa amin'ny ho avy. Hamarino tsara fa mijanona eo akaiky ianao hahita ny sasany amin'ireo lahatsoratro hafa mety hahaliana anao. Misaotra nijery sy nahita anao tamina lahatsoratra hafa!